Vulkan kuenderana neiyo Raspberry Pi 4 iri mumabasa | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Raspberry imwe chete bhodhi komputa iyo yakawana mukurumbira wakawanda uye yakashandiswa mukuvandudza mapurojekiti akasiyana siyana, kubvira pakushandisa chishandiso chekuitwa kweAI, vhidhiyo yekutarisa, kusvika mukugadzirwa kweNAS, pakati pevamwe. Uye kunyangwe nekuda kwekuzivikanwa kwayo kukuru, nharaunda yakagara yakumbira kuti mudziyo une Vulkan kuenderana, kubva pazviri kunyange izvo zvikumbiro zvakange zvisinganzwiki.
Eben Upton (musiki uye mushambadzi weRaspberry) akaita chiziviso pane Raspberry blog, umo rakafumura kutanga kwebasa pane yemahara vhidhiyo mutyairi we iyo VideoCore VI mifananidzo yekuwedzera inoshandiswa mu Broadcom machipisi. Nhau idzi dzinouya chaiko mushure mekuzivisa kuti Raspberry Pi 4 es inoenderana neOverGL ES 3.1.
Mutyairi mutsva anoenderana neVulkan graph API uye inonyanya kuitirwa kushandiswa neRaspberry Pi 4 mabhodhi uye mamodheru ayo achaburitswa mune ramangwana. Igalia inotungamira kukura kwesimba, mukubatana neRaspberry Pi Foundation.
Munyaya ye VhidhiyoCore IV GPU inopihwa mukati Raspberry Pi 3, zvinotaurwa kuti hazvina kukwana kuti zviitwe zvizere zveVulkan, saka kusangana kwemutyairi mune iyi vhezheni yeRaspberry Pi inobviswa zvachose.
Vulkan yakamisikidzwa seinotevera-chizvarwa mifananidzo uye komputa API Iyo inopa yakanyanya kushanda pamuchinjikwa-chikuva kuwana kune maGPU anhasi.
Iyo Vulkan API yakagadzirirwa kugadzirisa zvirinani maGPU anhasi uye kero mabhodhoro zvakajairika mashandiro ematanho muOpenGL, ichipa vanogadzira mifananidzo vane nzira nyowani yekuita basa rakanakisa kubva kune Hardware.
Eben Upton akataura mune yake posvo kubva kubhulogi kuti:
Iyo Vulkan API yakagadzirirwa kushandisa zvizere zvemazuva ano komputa / grafiti Hardware, kugadzirisa zvakajairika mabhodhoro muOpenGL.
Parizvino, chete yekutanga prototype yemutongi yakagadzirirwa, yakakodzera kuratidzira kuri nyore. Yekutanga beta vhezheni, iyo inogona kushandiswa kuvhura zvimwe chaizvo zvinoshandiswa, yakarongerwa kuburitswa muhafu yepiri yegore rino.
Mune iyo posvo naE Eben Upton, inoratidza kuti basa raitwa, kuratidza RGB katatu.
Upton anoti izvi zvinomiririrwa netriangle yeiyo Broadcom VideoCore VI Vulkan vhezheni humbowo hwe "isina chakashata RGB triangle, single tile" mune mutongi, kunyangwe iyi nhanho yekutanga yekusimudzira.
Ikozvino hapana mukana weiyo kodhi, asi kune vimbiso yekuti ichave ichiwanikwa gare gare. Kunyangwe kuuya kweVulkan kuRaspberry Pi kwakaziviswa, timu yekusimudzira inotaura kuti iri rinongova basa rekutanga uye kuti kune basa rakawanda rinofanira kuitwa.
Usati wanyanyisa kufara, yeuka kuti ichi chinongova kutanga kweiyo nzira yeVulkan yekuvandudza paRaspberry Pi. Ipo paine kuve nekuedza kwenzanga mukutungamira kweVulkan rutsigiro (pakutanga paVideoCore IV) kubvira 2018, Igalia yanga ichingoshanda pane uyu mutungamiriri mutsva kwemavhiki mashoma, uye isu tichine nzira refu kwazvo yekuvandudza nzira pamberi.
Uyewo, Khronos akazivisa v3d Mesa controller chitupa (yaimbove vc5), iyo inozivikanwa senge inoenderana zvizere neOpenGL ES 3.1.
Mutungamiriri anozivikanwa ne Broadcom BCM2711 chip inoshandiswa muRaspberry Pi mabhodhi 4. Kuwana chitupa kunokutendera kuti utaure zviri pamutemo rutsigiro rwegiraidhi zviyero uye shandisa zvinowirirana Khronos trademark.
Pakupedzisira, kusvika kwemutongi weVulkan mukuru kune Raspberry Pi Izvo zvinobatsira kuvandudza kushandiswa kwesimba, kuita, uye kuwanda-kwepakati kutumirwa.
Uye zvakare, iyo inobatsira zvikuru kusimudzira pane iyo Raspberry Pi, sezvo Vulkan ichizopa nzira nyowani dzekuwana kugona kwakanyanya kweiyo Hardware.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve iyo posvo, unogona kutarisa iwo madhiri acho mune iyo inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Vulkan kuenderana neiyo Raspberry Pi 4 yatove mumabasa